Kachasị Magnesium L-threonate ntụ ntụ Manufacturer & factory
Cofttek bụ onye nrụpụta ntụ ntụ Magnesium L-threonate kacha mma na China. Ụlọ ọrụ anyị nwere sistemụ njikwa mmepụta zuru oke (ISO9001 & ISO14001), yana ikike mmepụta kwa ọnwa nke 3300kg.
Magnesium L-threonate ntụ ntụ (778571-57-6) vidiyo
Magnesium L-threonate ntụ ntụ Smmezi
aha: Magnesium L-threonate
Usoro Molecular: C8H14MGO10
Molekụla arọ: 294.495 g / mol
Aha aha: Magnesium (2R, 3S) -2,3,4-trihydroxybutanoate
ngwa: Magnesium L-Threonate bụ ụdị kachasị anabata ọgwụ Magnesium. Ejiri ya iji kwalite ebe nchekwa, inye aka na ụra, na iji bulie ọrụ ọgụgụ isi n'ozuzu ya.
Magnesium L-threonate ntụ ntụ (778571-57-6) NMR Spectrum
Magnesium, dị ka anyị si mara bụ nnukwu ịnweta, dị oke mkpa maka ahụike - ọkachasị maka ụbụrụ na sistemụ akwara anyị niile. Magnesium-cation divalent (ion na-akwụ ụgwọ nke ọma), dị ezigbo mkpa maka nhazi sekit neuronal ka ọ na-ejikọ ndị na-anabata neurotransmitter ma bụrụkwa ihe na-akpata enzymes neuronal. Achọpụtala ya n'ụzọ bụ isi iji nyere aka belata nchekasị, ịda mba na nsogbu akwara ozi. N'ọgbọ ọgwụ na -arụ ọrụ, ọtụtụ ndị ọkachamara ahụike na -eche na ọ dị mkpa maka mgbakwunye magnesium maka ndị ọrịa na omume ha. Onyinye nri nri akwadoro maka magnesium dị n'etiti 300 na 420 milligrams/ụbọchị maka ọtụtụ ndị mmadụ, nke a na -enwetakarị site na nri. Agbanyeghị, enwetara atụmatụ achọrọ (EAR) maka magnesium anaghị enweta site na nri. Ọnụ ọgụgụ dị egwu dị n'ebe ahụ. Nke a na-eduga na ụkọ magnesium nke nwere ike ibute ụfọdụ nsogbu ahụike dị ka mmerụ ahụ ụbụrụ, ọrịa akwara ozi, ọrịa Parkinson na Alzheimer, isi ọwụwa, nchekasị, mmerụ ụbụrụ ụbụrụ, ọdịdọ, na ọnọdụ ndị metụtara ọkpụkpụ. Nke ahụ bụ ebe ụdị dị iche iche nke mgbakwunye magnesium na -abata na foto a. Agbanyeghị, enwere nsogbu n'ihe metụtara iji magnesium dị ka mgbakwunye maka nsogbu ahụike ọgụgụ isi na nke uche - ọ dị ka ha anaghị abanye ụbụrụ ngwa ngwa. Ụdị mgbanwe nke magnesium-Magnesium l-threonate, yiri ka ọ na-enyere aka ebe a.
Mkpughe-Magnesium L-Threonate ntụ ntụ
A na-agbakwụnye ihe mgbakwunye magnesium a na-ahụkarị maka ịmịkọrọ nke ọma yana otu a bụ Magnesium I-threonate. A na -enweta nke a site na ijikọ ụmụ irighiri magnesium nke na -enyere aka melite nkwụsi ike, ọnụego nnabata na ịdị irè. Magnesium I-threonate bụ ụdị magnesium kacha ọhụrụ. Otu ìgwè ndị na-ahụ maka akwara ozi na Massachusetts Institute of Technology na Mahadum Tsinghua dị na Beijing mepụtara Magnesium I-threonate na ngwakọta nke magnesium na I-threonate, metabolite nke vitamin C. Ihe ịtụnanya a. mgbakwunye na -agagharị n'ụzọ dị mfe site na nzacha nchebe nke ụbụrụ iji ruo ebe ọ kwesịrị. Magnesium I-threonate na-abụghị eke bụ obere ihe n'ihi na uru ya bara ụba.
N'ịbụ nke dị na nnu Epsom, Magnesium sulphate anaghị emetụta ahụ mmadụ ngwa ngwa n'ihi ya, ọ nwekwara mmetụta ụfọdụ. N'ịgwakọta threonic acid na magnesium, a na-etolite Magnesium I-threonate dị ka nnu nke nwere ike ịbanye n'ime ụbụrụ n'ụzọ dị mfe site n'ọbara. Na mbụ enwere ike nweta nke a naanị site na nnyefe ọbara. Dị ka nyocha anụmanụ si dị, nke a bụkwa ụzọ kachasị dị irè iji kpalie magnesium n'ime sel ụbụrụ.
Ihe mgbakwunye Magnesium I-threonate a bụ isi mmalite kachasị dị irè iji kwado ịrụ ọrụ ọgụgụ isi wee mepụta ezinụlọ nke nootropics yana ọgwụ ọgwụ.
Magnesium I-threonate na-arụ ọrụ
Nri nke oge a enweghị magnesium na mgbakwunye, ọgwụ ndị a na -ahụkarị na -agbari ọkwa magnesium. N'ọtụtụ mba gụnyere United States, ihe na -erughị 50% nke ndị mmadụ na -ezute oriri ma ọ bụ mmachi kwa ụbọchị (RDA) nke magnesium. Ọ bụ ezie na ụbụrụ chọrọ oke magnesium, oke mkpokọta dị n'ọbara.
Magnesium dị mkpa maka ọtụtụ ọrụ akwara ozi yana ọnọdụ gụnyere:
Isi ụbụrụ mmerụ ahụ ma ọ bụ mmebi
imetụ mmadụ n'isi
Ihe ọdịdọ na Schizophrenia
Ọ bụ ihe ijuanya na ọ nweghị oke magnesium zuru oke na mpaghara ụbụrụ, na -egbochi ịdị irè ya. Nke a bụ ebe mgbakwunye Magnesium l-threonate dị mkpa iji mejupụta ezughi oke magnesium, ọkachasị mgbe ndị na-anaghị eri magnesium zuru oke site na isi nri na-egosi ọnọdụ neurocognitive dara ada na mgbaàmà ndị yiri ya.
Ọrụ nke Magnesium l-threonate
Ọ na -abanye n'ime iji ruo ebe ziri ezi nke ụbụrụ, ebe achọrọ magnesium.
Ọ na -eme ka ụbụrụ nwee ike ịga n'ihu na ịzụlite nke na -enyere aka maka nsụhọ na mmụta ime.
Ọ na -enyere aka n'ịmalite mmepe nke mkpụrụ ndụ ụbụrụ ọhụrụ.
Uru nke Magnesium I-threonate
Magnesium nwere ọtụtụ uru ahụike. Ewere ya n'ụzọ dabara adaba, a maara ya ka ọ na -ebuli ọnọdụ elu, na -akwalite nkwụsi ike ịnagide nrụgide, na -akwalite ikike itinye uche na itinye uche, kwalite ume ma melite ogo ụra. Ọ na -ewepụkwa ụbụrụ ụbụrụ ụtụtụ (ọnọdụ nke mgbagwoju anya, ebe nchekwa adịghị mma, na enweghị itinye uche na mgbado anya na ido anya nke ọma) - akara ama ama na Vestibular Migraine.
Ikike nke ụbụrụ ịgbanwe bụ neuroplasticity (nke a makwaara dị ka plastic neural, ma ọ bụ plastik ụbụrụ). Mgbanwe a na -agba mbọ hụ na ụbụrụ na -enwe ike ịkekọrịta njikọ akwara ozi ọhụụ (njikọ neuronal) ma na -emetụta mmụta, ebe nchekwa, akparamagwa, yana ọrụ ọgụgụ isi. Plasticity nke ụbụrụ na -arụ ọrụ dị mkpa na usoro ịka nká nke ụbụrụ, na -efufu plastik na -ebute enweghị ọrụ ọgụgụ isi. Nnyocha na neuroplasticity ma ọ bụ plastik ụbụrụ na -abawanye na ndị ọkachamara ahụike na ndị ọkà mmụta sayensị na -achọpụta na ịba ụba ọkwa magnesium neuronal nwere ike ibuli njupụta synapse na plastik, na -emeziwanye ọrụ ọgụgụ isi. Ọ na -egosikwa nsonaazụ na -ekwe nkwa iji nyere aka 'rewiring' ụbụrụ na mpụta nke mmerụ ahụ ụbụrụ na nsogbu ahụike uche. Ihe mgbakwunye magnesium ọ bụla nwere ike ọ gaghị aba uru iji lebara okwu a anya-a kọọrọ Magnesium l-threonate ka ọ gafee ihe mgbochi ụbụrụ ọbara iji bulie ọkwa magnesium nke ọma na ụbụrụ.
Na mgbakwunye, ọ nwekwara uru ahụike ndị ọzọ gụnyere iguzogide ụkwara ume ọkụ, mgbachi na akwara, ike nke sistem, BP dị elu, osteoporosis na ọnọdụ obi.
Magnesium l -threonate nwere mmetụta izu ike, ọ na -ebelata akwara ma na -enyere aka igbochi na ibelata ọdịdọ na nsogbu ndị ọzọ metụtara akwara.
Magnesim l-threonate na-ewusi ọkpụkpụ ike site na ịkwalite njupụta nke ọkpụkpụ, na-ebelata mbufụt, na-eme ka ịdị mma nke ụra dị mma ma na-ewepụsị eriri afọ.
Magnesium I-threonate bụ ngwaahịa ọhụrụ ka ọ nweghị ihe akaebe ogologo oge maka ojiji ya. Nke a na -abawanye uru nke ezigbo nyocha pụta. Nnwale ụlọ ọgwụ emere na -ejigide ntụkwasị obi ya.
Nnwale ụlọ ọgwụ nke Magnesium I-threonate
Akwụkwọ akụkọ ahụike e bipụtara enyela ụfọdụ ọmarịcha nghọta na uru ahụike Magnesium I-threonate. Otu ọmụmụ nke gụnyere ndị agadi nwere ọnọdụ itinye uche, ebe nchekwa, nsogbu ihi ụra na nchekasị ka ejiri akara mee ihe n'akụkụ 4 dị iche iche - ebe nchekwa na -arụ ọrụ, ebe nchekwa na -emebi emebi, mgbado anya na ọrụ ndị isi. Nke a nwere ọtụtụ nka na -enyere aka n'ịmepụta ebumnuche, atụmatụ na igbu ya. Eji ndị Magnesium I-threonate na-achị ndị isi maka ọnwa 3 sochiri anya na dịka a tụrụ anya ya achọpụtala na ọkwa magnesium abawanyere nke ukwuu. Nke a rụpụtara arụmọrụ isiokwu ahụ na mpaghara ule anọ niile. O mekwara ka mbelata afọ ụbụrụ ụbụrụ. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, isiokwu ndị a toro ihe fọrọ obere ka ọ bụrụ afọ 10 na afọ ụbụrụ ha. Agbanyeghị, Magnesium I-threonate enyerechaghị aka n'ịkwalite ụra, nkwalite mmụọ ma ọ bụ ibelata nchegbu maka okwu ahụ.
Ọmụmụ maka anụmanụ maka Magnesium I-threonate ntụ ntụ
Nnyocha emere maka anụmanụ maka Magnesium I-threonate nwere ụfọdụ ihe na-atọ ụtọ.
Nsogbu nchekasị na Magnesium I-threonate
Magnesium I-threonate bụ ụdị dị elu nke magnesium nke na-arụ ọrụ dị ka ihe na-akụda mmụọ, ọ na-arụkwa ọrụ site na ibelata homonụ nrụgide, na-amụba nwayọ nke neurotransmitter GABA kama. Ọ na -enye aka na igbochi kemịkalụ nchekasị na -abanye n'ụbụrụ. Nnwale Magnesium I-threonate na anụmanụ egosila na ọ nwere ike bụrụ ihe mgbochi maka inye aka na nsogbu nchekasị, phobias nkịtị na nsogbu traumatic post.
Magnesium I-threonate megide Alzheimer na Dementia
A makwaara Magnesium I-threonate na-agwọ dementia na ọrịa Alzheimer. Ejirila oke na oke na nyocha Alzheimer ka ncheta na nkwalite ụbụrụ ha yiri nke mmadụ. Achọpụtala Magnesium I-threonate iji nyere aka wepụ mfu nke ebe nchekwa na mgbada uche na oke.
Enwere njikọ mara n'etiti ọkwa magnesium dị ala na mfu ncheta. Mmụba dị ukwuu nke magnesium na nri na -ebute oke mgbaka. Nnyocha nwere olile anya na ọtụtụ uru neuroprotective a nwalere na òké nke na -egosipụta ohere nke ịgwọ ọrịa Alzheimer na mmadụ.
Magnesium I-threonate na mmụta na n'isi
Oke mgbe ejiri Magnesium I-threonate were mee ka ha mara ihe. Ha gosipụtara njikere ịmụ ihe na ịrụ ọrụ ka mma, na mgbakwunye na ncheta dị mkpirikpi na ogologo oge.
Ihe akaebe na nkwado maka Magnesium Threonate
Nnyocha izizi banyere Magnesium threonate gosipụtara; ịrụzi chromosome mebiri emebi, na-abawanye na ọkwa magnesium n'ime ụbụrụ ma e jiri ya tụnyere ụdị magnesium ndị ọzọ, na-arụ ọrụ nke ọma na ebe nchekwa yana karịa mgbanwe niile nke ncheta obere oge. Mgbe ọ na -eri magnesium n'ụdị ọ bụla n'ime ahụ, a na -atụ anya na ọ ga -arụ ọtụtụ ọrụ gụnyere ọrụ akwara, imepụta protein na abụba abụba, ime ka vitamin B rụọ ọrụ, ịkpụkọta ọbara, izo insulin, na ịmepụta ATP. Na mgbakwunye, magnesium na -arụ ọrụ dị ka ihe mkpali maka enzymes dị iche iche n'ofe ahụ. Ọ na -enye aka n'ịkwalite sistem.
Nhọrọ nke mgbakwunye Magnesium I-threonate
Hụ na ị nyochara aha mmado nke ọma ka ị hụ na ihe mgbakwunye ahụ nwere Magnesium I-threonate.
Ntụle akwadoro nke Magnesium I-threonate ntụ ntụ
Nri a na -atụ aro maka magnesium n'ime ụmụ nwoke bụ 420 milligrams na ụmụ nwanyị ọ bụ milligrams 320. Agbanyeghị, nke a nwere ike ịdị iche dabere na afọ. Enweghị usoro akwadoro maka Magnesium I-threonate. Agbanyeghị na milligram 1500 ruo 2000 kwa ụbọchị kwesịrị ịbụ ụzọ dị mma maka uru ọgụgụ isi bara uru. Otu ihe atụ nke onye na-ere ahịa kacha mma bụ Magtein nke enyere ikike maka Magnesium I-threonate nke anwalekwara na anụmanụ. Ọ mejupụtara usoro siri ike site na iji mgbakwunye dị irè.
Usoro akwadoro Magnesium I-threonate bụ:
Ụmụaka nọ n'okpuru afọ iri na atọ-80-240 milligram/ụbọchị
Ụmụ nwanyị karịrị afọ iri na anọ -300 -360 milligram/ụbọchị
Ụmụ nwoke karịrị afọ iri na anọ-400-420 milligram/ụbọchị
Ụmụ nwanyị dị ime/ na-enye nwa ara: 310-400 milligram/ ụbọchị
Ọ bụ ezie na nke a nwere ike ịdị ka nnukwu onunu ogwu, buru n'uche na ọ bụ naanị pere mpe ka a na -etinye. Yabụ, miligram 2,000 nke Magnesium l-threonate ga-anapụta naanị ihe dị ka milligram 144 nke magnesium elemental, nke bụ ihe dịka otu ụzọ n'ụzọ atọ nke Enyemaka Dietary akwadoro maka magnesium.
Ebumnuche maka ịtụle ọtụtụ isi mmalite nke magnesium
Ọ dịghị ihe na -egbochi gị ịtụle ọtụtụ ụdị magnesium dị ka magnesium glycinate, citrate ma ọ bụ gluconate. E nwere ọtụtụ usoro dị n'elu ndepụta maka oriri magnesium. Ihe ịrịba ama nke ịchọpụta oriri magnesium zuru oke bụ oche na -adịghị ọcha wee bụrụ ihe mgbaàmà na -acha ọbara ọbara.
Ogologo oge ole ka Magnesium l-threonate na-ewe ka ọ rụọ ọrụ?
A kọwo na Magnesium l-threonate na-eri ọnụ ga-ewe opekata mpe otu ọnwa iji bulie ọkwa magnesium ụbụrụ na ọkwa achọrọ ebe ọ nwere ike lebara ụfọdụ nsogbu ụbụrụ anya, dị ka ịda mba, nchekasị na mfu nke ncheta afọ yana nwee nnukwu mmetụta na ebe nchekwa. nhazi na ụbụrụ na -arụ ọrụ.
Mmetụta dị n'akụkụ Magnesium I-threonate
Enwere mmetụta ole na ole amaara ama nke Magnesium I-threonate nke gụnyere iro ụra, isi ọwụwa, mmegharị afọ na-adịghị mma na ọgbụgbọ. Otu mmetụta a na -ahụkarị nke amara nke mgbakwunye magnesium bụ sistemụ mgbari nri. Agbanyeghị, na Magnesium I-threonate, o kwesịghị ime n'ihi na emebere ya ka etinyere ya n'ụbụrụ. Ọ bụrụ na ị nọ na ọgwụ ọ bụla ọzọ, ọ ga -adị mma ka ị gakwuru dọkịta gị ma ọ bụ GP maka ndụmọdụ ka mma. A naghị atụ aro Magnesium maka ndị nwere ọrịa akụrụ n'ihi na ndị a na -amịpụta magnesium n'ahụ gị.
Ajụjụ dị adị bụ-ekwesịrị iwere Magnesium I-threonate na magnesium ndị ọzọ Mmeju? Ọ bụrụ na ị na-ewere magnesium maka nsogbu nri, nwaa ị nweta Magnesium I-threonate. Ọ bụrụ na ịmalite inwe afọ ntachi ma ọ bụ stool na -adịghị, ọ ga -abụ ihe amamihe dị na ya ịlaghachi na magnesium n'onwe ya. Magnesium l-threonate na caffeine nwere ike ịkwalite ọgụgụ isi na arụ ọrụ anụ ahụ mana mgbe ịdabere na ya, ọ nwere ike bute ahụ ahụ ịlaghachi na ike ọgwụgwụ, arụ ọrụ adịghị mma, na mgbakasị ahụ ma ọ bụrụ na ewereghị ya mgbe niile. Nke a bụ ihe kpatara oke mgbanwe na ọnọdụ ụfọdụ ndị mmadụ na enweghị mmasị na ịnụ ọkụ n'obi ime mmega ahụ. Ajụjụ ọzọ a na -ajụkarị bụ ogologo oge ole ka ọ ga -ewe ruo mgbe ị ga -achọpụta ezigbo mgbanwe? Ndị ọkachamara ahụike na -atụ aro ichere opekata mpe izu 4 ruo 8 tupu ịtụfu egbe gị!
Kedu onye na-ekwesịghị iwere Magnesium l-threonate?
Ndị mmadụ nwere nsogbu obi
Ndị mmadụ nwere BP dị elu a na -achịkwaghị achịkwa (≥ 140/90 mmHg)
Ndị mmadụ nwere ọrịa mgbaka chọrọ ụlọ ọgwụ n'afọ gara aga
Ndị mmadụ nwere nkwarụ akụrụ/ọrịa imeju
Ndị mmadụ na -arịa ọrịa shuga Ụdị nke Mbụ
Ndị mmadụ nwere ọrịa thyroid na -akwụghị chịm
Ndị mmadụ nwere ọrịa na -alụso ọrịa ọgụ dị ka Nje Virus Immunodeficiency Human/ Enwetara Immunodeficiency Syndrome
Ndị mmadụ na -a inụ ọgwụ ike ma ọ bụ mmanya na -aba n'anya n'ime ọnwa iri na abụọ gara aga
Ndị mmadụ na -ata nhụjuanya carotid, lacuna kwupụtara, mwakpo ischemic na -agafe agafe na nnukwu ọrịa akpa ume.
Ndị nwere ọnọdụ ọjọọ
Ndị mmadụ nwere ọnọdụ ebe mgbakwunye nwere ike ibute mgbochi maka nyocha positron emission tomography (PET), gụnyere ọrịa strok ma ọ bụ nkụchi obi n'ime ọnwa isii gara aga ma ọ bụ enweghị ike ịrahụ otu awa.
Ndị mmadụ nọ na ọgwụ amachibidoro ị were ya yana mgbakwunye magnesium dị ka ihe na -ebelata ọbara na ọgwụ nje.
Ndị mmadụ na -enwe nfụkasị ma ọ bụ nwee mmetụta maka ihe ọ bụla eji emeju
Ụmụ nwanyị dị ime, na -enye nwa ara, ma ọ bụ na -eme atụmatụ ịtụrụ ime kwesịrị ịkpọtụrụ dọkịta tupu ha ewere mgbakwunye a
Ịhọrọ mgbakwunye kwesịrị ekwesị: Magnesium l-threonate reviews
Ndị mmadụ na-arịa nsogbu ihi ụra na enweghị nlebara anya na-eji mgbakwunye a-Magnesium l-threonate jupụtara na vitamin-C threonate n'ihi na ọ na-eme ka ọ dị elu na bioavailability ma e jiri ya tụnyere mgbakwunye ọzọ Magnesium l-threonate. Ihe mgbakwunye ahụ nwere ike ịgafe mgbochi ụbụrụ ọbara nke na-enye magnesium zuru oke na ụbụrụ ma na-eme ka ikike ọgụgụ isi dịkwuo mma. Site na ijikọta magnesium na theanine na mineral ndị ọzọ dị mkpa, enwere ike nye ahụ ahụ nri kwa ụbọchị na -enweghị ibelata vitamin na mineral ndị ọzọ.
Magnesium l-threonate na-eme ka ebe nchekwa ka mma na onye merela agadi karịa afọ 50 ma na-arịa mgbaka, ọrịa Parkinson ma ọ bụ mgbaàmà akwara ozi adịghị ike.
Iji mgbakwunye eme kwa ụbọchị na -eme ka ncheta dịkwuo mma, na -akwalite ikike ọgụgụ isi na mmụta site ihe dị ka pasentị iri na asatọ n'ime oge iri atọ ruo ụbọchị iri isii. Ọ na -emepụta mmetụta dị jụụ na izu ike na mọzụlụ ma na -enye nkwalite anụ ahụ na ọgụgụ isi ozugbo.
Ụfọdụ ndị mmadụ na -ahụ na ọ dị mma iwere mgbakwunye a n'ụdị mbadamba ka enwere gelatin na -ekpuchi na mbadamba ndị ahụ pere mpe, dị mfe ilo ma dịkwa mfe mgbaze. Mkpụrụ ọgwụ ndị a kpuchiri na gelatin na -ewepu nsị na sistemụ nri
Ọdịnaya threonate na mgbakwunye ahụ na -ewepụ ike ọgwụgwụ anụ ahụ na nke mmụọ, na -akwalite ụra site n'ime ka ahụ dị jụụ. Ezigbo ụra na-enyere aka igbochi ọrịa ụkwụ na-adịghị akwụsị akwụsị (ọnọdụ nke na-akpata agụụ na-enweghị ike ịkwaga ụkwụ gị) yana nrọ dị nro.
Mgbe ewere ihe mgbakwunye ahụ ihe karịrị ụbọchị iri atọ, ọ kwalitere mgbado anya na ibelata ụfụfụ echiche na ịbawanye ikike ọgụgụ isi nke butere mgbago anya na imepụta ihe ka ukwuu n'oge ọrụ, mgbe ị na -agụ, na -amụ ma ọ bụ na -eme mmega ahụ ọ bụla.
Ekwesịrị iji mgbakwunye ahụ na nri ma ọ bụ tupu ị lakpuo ụra. RDA bụ capsules atọ ruo anọ kwa ụbọchị yana nri, mana enwere ike iji ya mgbe nri gachara mgbe traktị nri na -arụsi ọrụ ike n'oge a, na -enye nsonaazụ ngwa ngwa.
Ihe mgbakwunye nwere obere mmetụta. Ihe na -adịghị mma gụnyere afọ iwe na nke dị nro bụ isi ọwụwa ma ọ bụ iro ụra. Yabụ, enwere ike ịsị na Magnesium l-threonate bụ ihe nchekwa zuru oke ka ewere ya dị ka mgbakwunye kwa ụbọchị yana enweghị mmetụta ọjọọ ọ bụla.
Ebee ka ị nwere ike zụta Magnesium l-threonate?
Ọ dabara nke ọma, ọtụtụ ndị na-emepụta ihe, ndị na-ere ahịa na ụdị na-ere mmeju dị ịtụnanya-Magnesium I-threonate. Ọ dịkwa mfe na ntanetị yana ọ dịghị mkpa ịgbalịsi ike ịzụta ya. Agbanyeghị, otu ihe ị ga -eburu n'uche bụ na ọnụ ala adịghị mma. Na -achọ mgbe niile maka akara kacha mma, onye na -ere ahịa na onye na -ere ahịa nwere ike ịtụkwasị obi na onye a na -akwanyere ùgwù, onye agbakwunyere usoro nrụpụta ya na nchekwa ya
Magnesium l-threonate ntụ ntụ Australia
N'Australia, mgbakwunye ahụ dị na ntụ ntụ na capsule. Ngwaahịa dị ka-Neuro-Mag Magnesium l-threonate Powder
Eziokwu Eziokwu gbasara ngwaahịa a
Ije Ozi nha 1 scoop (ihe dị ka gram 3.11)
Ije Ozi kwa akpa ihe dịka 30
Ọnụ ego nke Ije Ozi
Otu ihe mgbakwunye nke mgbakwunye ahụ (Neuro-Mag® Magnesium l-threonate) na-enye miligram 2,000 nke magnesium l-threonate, nke na-atụgharị gaa na milligram 144 nke Mg nke nwere ike ịmịkọrọ nke ukwuu. Ụbụrụ na -amịkọrọ ihe mgbakwunye maka ahụike ụbụrụ etinyere nke ọma na ịmata ntorobịa. Ihe mgbakwunye ahụ na -enyere aka ijigide njikọ synaptik n'etiti mkpụrụ ndụ ụbụrụ ma na -akwalite ụzọ akara akara ụbụrụ ụbụrụ dị mma. Ọ bụ ihe na -atọ ụtọ, ntụ ntụ mkpụrụ osisi nke nwere ntụ ntụ ntụ ntụ.
Citric acid, acacia chịngọm, maltodextrin, ụtọ eke, wepụ stevia, silica.
Magnesium l-threonate ntụ ntụ Canada
Na Canada, mgbakwunye ahụ dị ka-Naka Platinum Magnesium l-threonate
Naka Pro's Pro MG12 Magnesium l -threonate dị ka mgbakwunye na Canada egosiri na ọ bụ naanị ụdị magnesium nke nwere ike ịbawanye ọkwa magnesium na ụbụrụ. Nwere milligram 144 nke Mg na 2000 milligrams nke magnesium l-threonate PRO MG12 nwere ike chekwaa ụbụrụ site na mbibi ebe nchekwa ma melite mgbaàmà nke ọrịa Alzheimer n'oge.
Ọnụ ego kwa otu
Efrata-Ọgwụ ọ bụla nke capsules 3 nwere Magnesium l-threonate 2000 milligram (144 milligram nke elemental Mg)
Ihe ndị na-abụghị ọgwụ
Microcrystalline cellulose, magnesium stearate (isi nri), hypromellose (ihe na -emepụta capsule)., O nweghị gluten agbakwunyere, mkpụrụ, àkwá, ngwaahịa mmiri ara ehi, azụ ma ọ bụ azụ azụ, ngwaahịa anụmanụ, ọka, agba ma ọ bụ ụtọ, ọka wit ma ọ bụ yist.,
Magnesium l-threonate ntụ ntụ United Kingdom
Na United Kingdom, mgbakwunye ahụ dị n'ụdị ntụ ntụ na capsule. Ọ bụ otu ngwaahịa ahụ dị na Australia.
Na -emechi emechi na ebe dị jụụ, kpọrọ nkụ
Magnesium I-threonate-nzọụkwụ ọzọ
Magnesium dị mkpa maka ahụike ahụike yana ahụike. Ezigbo ọgwụgwọ ọgwụgwọ maka ahụike uche nke magnesium na -agbagharị site na enweghị ike ịbanye n'ime nchekwa nchekwa ụbụrụ. Magnesium I-threonate nwere ike ịnagide nke a site na ịbanye na mpaghara ụbụrụ chọrọ. Ebe ọ bụ na ọtụtụ ndị mmadụ na-ata ahụhụ n'ihi nkụda mmụọ n'ihi enweghị magnesium n'ime ahụ ha, ọ bara uru na-enye Magnesium I-threonate ntụ ntụ iji melite ikike ụbụrụ ịnagide nsogbu ahụ.
Ozi e nyere sitere na ihe nyocha na nchọcha. FDA anabataghị nke a ma ebughi n'obi ịchọpụta, gwọọ ma ọ bụ gbochie ọrịa ma ọ bụ nsogbu ahụike ọ bụla.
Nyere na nchịkwa nri na ọgwụ ọjọọ anaghị ahazi ihe mgbakwunye n'otu ụzọ ahụ ka ọ na -enyocha ma na -enyocha ọgwụ, ọ dị mkpa ịchọ ụdị nke ndị ọzọ kwadoro, dị ka NSF International (nnwale ngwaahịa ngwaahịa America, nyocha na nzukọ asambodo), Labdoor, ma ọ bụ Laboratories Underwriters, maka nchekwa na ịdị mma.
Nke ikpeazu mana ọbụghị opekata mpe, tụlee ịzere mgbakwunye nwere ihe ọ bụla nwere ike ime, dị ka agba agba, ụtọ na ihe nchekwa.
Xu T, Li D, Zhou X, Ouyang HD, Zhou LJ, Zhou H, Zhang HM, Wei XH, Liu G, Liu XG. Oral Ngwa nke Magnesium-L-Threonate Attenuates Vincristine-kpatara Allodynia na Hyperalgesia site na Normalization nke Tumor Necrosis Factor-α / Nuclear Factor-κB. Anesthesiology. 2017 Jun; 126 (6): 1151-1168. doi: 10.1097 / ALN.0000000000001601. PubIDed PMID: 28306698.
Wang J, Liu Y, Zhou LJ, Wu Y, Li F, Shen KF, Pang RP, Wei XH, Li YY, Liu XG. Magnesium L-threonate na-egbochi ma weghachi mmezi nke ebe nchekwa na-emetụta ihe mgbu neuropathic site na mgbochi nke TNF-α. Dibịa Bekee. 2013 Sep-Ọkt; 16 (5): E563-75. PubIDed PMID: 24077207.
Mickley GA, Hoxha N, Luchsinger JL, Rogers MM, Wiles NR. Magnesium-L-threonate na-eri nri na-egbu oge na -ebibi ngwa ngwa ma belata mgbagha azụ na-enweghị atụ. Pharmacol Biochem Behav. 2013 Mee; 106: 16-26. doi: 10.1016 / j.pbb.2013.02.019. Epub 2013 Mar 6. PubMed PMID: 23474371; PubMed Central PMCID: PMC3668337.